मतगणना प्र क्रियामा यस्तो गरे पछि बालेनको आपत्ति, लेखे यति लामो स्टा’ टस हेर्नुस – Ap Nepal
May 14, 2022 183
काठमाडौँ महानगर`पालिकामा मेयर पदका स्वतन्त्र पदका उम्मेद`वार बालेन साहले मत`गणना प्रक्रियामा आपत्ति जनाए`का छन् । मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेद`वारको एकजना प्रति`निधि राख्ने कुरामा साहले आ`पत्ति जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा बालेनले लेखेका छन्, ‘मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेद`वारको एकजना प्रतिनिधि भन्ने कुरा आयो ।
सबै उम्मेद`वार बराबर भनेर लोक`तान्त्रिक पद्धतिको निर्वाचन भएको छ । उम्मेदवारी दिने समय होस् वा शुल्क वा प्रक्रिया, कतै पनि पार्टीगत उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारको भिन्नता सोचिएको छैन । हरेकलाई हरेकसँग प्रतिस्पर्धी मानिएको छ । हरेकले पाउने प्रत्येक मतको ‘मतभार’ बराबर छ । यस्तोमा दलगत र स्वतन्त्र भनेर गणनामा किन फरक गर्न खोजिदैछ ?
स्वतन्त्रहरू आफैमा फरक फरक विचार, समूह र उम्मेदवार हुन् । उनीहरू आफै बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । यस्तोमा पाँच जना स्वतन्त्र भनेर के आधारमा एकै डालोमा राखिएको हो ?
कुन कुन विचार`धारा वा सम्बन्धले पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले एकजना मात्रै प्रतिनिधि छान्ने हो ? पाँचजनाले एकजना मात्रै प्रतिनिधिको छनौट गर्ने प्रक्रिया र विधि के हो ? आयो`गले सो किसि`मको चुनावका लागि बनाएको कार्य`विधि कहाँ छ ? पक्कै पनि यसको लोक`तान्त्रिक जवाफ छैन ।
यसैले, सामान्य प्रावि`धिक कुराहरूमा सम्झौता नगर्न लोकतन्त्रसँग र आफ्नो प्रतिनिधि राख्न पाउने उम्मेद`वारको अधिकारसँग खेलबाड नगरियोस् । ५ जना स्वतन्त्रको एकजना साझा प्रतिनिधि भन्ने कुरा कानुनी, व्यवहारिक र लोक`तन्त्रको कसीमा हदैसम्मको अन्याय`पूर्ण छ र यो लोकतन्त्रको विरु`द्धमा छ ।
यसले विवा`दको सिर्जना गरेर मत`गणना नै शान्तिपूर्ण हुँदैन कि भन्ने शंका उत्पन्न गराउँछ । यसप्रति निर्वाचन आयोग सजग बनोस् । र, हरेक स्वतन्त्र उम्मेदवार`लाई पनि आफ्नो प्रतिनिधि मत`गणनामा सामेल गर्न दिओस् । – रातोपाटी
Prevअध्यक्ष पदमा एमालेका लोकेन्द्रबहादुर घले विजयी
Nextकाठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना सुरु, के छ पछिल्लो अपडेट ?
फेरी यी ४ चर्चित सांसदले प्रचण्डलाई छोडेर गए ए; मालेको ओली स, मुहमा